Xubno argagixisada Al-shabaab iyo Daacish (ISIS) oo Puntland lagu xukumay (sawirro) – Radio Daljir
Xubno argagixisada Al-shabaab iyo Daacish (ISIS) oo Puntland lagu xukumay (sawirro)
Luulyo 29, 2019 6:51 b 0
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukuno kala duwan waxa ay ku ridday xubno ka tirsan kooxaha Argagixisada ee Shabaab iyo Daacish (ISIS) oo falal isugu jira dilal iyo qaraxyo ka gaystay geyiga Puntland. Goobta uu xukunka ka dhacay waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha laamaha amniga, Xeerilaalinta iyo garsooreyaal sare.
Tirada maleyshiyaadka la xulumay ayaa gaaraysa 19 qof oo laamaha amniga ay ka soo qabteen meelo kala duwan. Ciidamada ayaa sidoo kale waxyaabaha qarxa ka soo qabtay Xaafada Buuraha ee dhanka bari ee magaalada Bossaso.
Puntland ayaa dagaal kula jirta Ururada Daacish iyo Shabaab ee ku dhuumaaleysta buuraayda Golis iyo Calmadow.
Guddiga Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka Soomaaliya oo shir ka yeeshay qaraxyadii Bossaso iyo doorka dowladda Qatar (dhegayso)